20 IINJONGO ZESMART ZOBUQU ZAKHO ZOKUPHUCULA UBOMI BAKHO - UKUFUMANA IINJONGO
20 Iinjongo zeSMART zobuqu zakho zokuphucula ubomi bakho
Bonke ubomi bethu bujolise ekufezekiseni iinjongo ezithile zobomi, nokuba sicinga ngazo ngocoselelo okanye hayi. Ukuze sisebenze ngakumbi kwaye sivelise imveliso, kufuneka sifunde ukuseta iinjongo ezithile esinokuzisebenzisa ukulinganisa ukukhula kwethu kunye nenkqubela phambili. Ngamanye amagama, iinjongo zethu kufuneka zibe zi-SMART, kwaye imizekelo yeenjongo ze-SMART akunzima ukuza nazo.
Ukukukhokela xa uqala ukubhala iinjongo ze-SMART zokuphuhla kwakho, ndikunike imizekelo yeenjongo ze-SMART onokuthi uzibekele ukuphucula ubomi bakho.
Zithini Iinjongo Zakho?
Zithini iinjongo ze-SMART?
Ama-20 eeNjongo zeZinjongo ze-SMART
Iingcebiso ezingakumbi kuseto lweNjongo
Iinjongo zobuqu zibonisa izinto ofuna ukuziphumeza ebomini, nokuba ngaba ziinjongo zeshishini, iinjongo zosapho, okanye iinjongo zendlela yokuphila. Xa ucinga malunga nento ofuna ukuyiphumeza ebomini kwaye usete iinjongo zokuzifezekisa, uya kuba ngakumbi iziqu zakho kwaye kulungile .
Iinjongo zakho ezithile zinokuba kwifom iinjongo zexesha elifutshane okanye iinjongo zexesha elide . Banokubonelela ngesikhokelo sexesha elide kunye nenkuthazo yexesha elifutshane. Apha ngezantsi kukho imizekelo yeenjongo zakho:
Funda into entsha veki nganye
Zilolonge rhoqo kusasa
Gcina ingxelo yemihla ngemihla
Amavolontiya kwinto engenzi nzuzo rhoqo ngenyanga
Igama loqhagamshelwano S.M.A.R.T. iinjongo ziinjongo ezibhaliweyo ukungqinelana nezi nqobo zilandelayo: Ecacileyo, enokulinganiswa, enokufikeleleka (okanye efikelelekayo), eyiyo (okanye efanelekileyo), kunye nexesha . I-S.M.A.R.T. inkqubo kwasekuqaleni yayingumbono wolawulo owawuziswa njengendlela ye-SMART yokubhala iinjongo zolawulo kunye neenjongo. Kwabhalwa ngale ndlela ilandelayo:
Ngokukodwa Ukujolisa kwindawo ethile yokuphucula.
Ukulinganisa : Qikelela okanye uphakamise isalathiso senkqubela phambili yeenjongo ezinokulinganiswa.
Ukuzuzwa : Chaza ukuba ngubani oza kuyenza kwaye njani.
Yinyani : Chaza ukuba zeziphi iziphumo ezinokufezekiseka, xa unikwa izixhobo ezikhoyo.
Ehambelana nexesha :Chaza umhla ekujoliswe kuwo okanye ixesha elibekiweyo xa iziphumo zingafezekiswa.
Ngaphandle kokwenza iinjongo zakho zibe zi-SMART, zinokuba ziinjongo ezingacacanga okanye izigqibo nje. Ukubeka iinjongo zeSMART Kuya kukunceda ucinge ngeenjongo zakho ngononophelo ukuze unike iinjongo zakho ezinokulandelwa ngokulula kunye nokuphunyezwa.Kodwa ukuseta injongo ye-SMART ayisiyiyo, kuya kufuneka uyazi ngokuthe ngqo ukuba wenzeni ngokulandelayo ukukunceda ukuba ufikelele kwinyathelo ngenyathelo ngenyathelo. Inkqubo ye- Yenze Yenzeke Incwadi sisixhobo esihle sokukunceda ucwangcise injongo yakho kwaye ufike kuyo ngempumelelo. Fumana incwadana yakho uze ufikelele kwiinjongo zakho kulo nyaka!
Oku kulandelayo yimizekelo yeenjongo ze-SMART ezingama-20 onokuzibekela ukuphucula ubomi bakho. Basika kwiindawo ezahlukeneyo zobomi kodwa ngokubanzi bawela kudidi lweenjongo zabo. Ezinye zazo yimikhwa yemihla ngemihla kunye neyeveki ngelixa ezinye zinokuthatha ixesha elide ukufezekisa.
1. Hamba imizuzu engama-30 ngosuku, iintsuku ezi-5 ngeveki
Impilo bubutyebi, kwaye ukuzilolonga imizuzu eyi-150 ngeveki kunokunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo, ukutyeba kakhulu, isifo seswekile, uxinzelelo lwegazi, uxinzelelo, njl..
Ungalufezekisa olu njongo ngokuhamba ngokukhawuleza imizuzu engama-30 ngosuku ngeMivulo-ngolwesiHlanu. Unokuqhubeka nokuyaphula ukuya kwimizuzu eli-15 inye kusasa nangokuhlwa.Intengiso
2. Ukuphucula izakhono zokuMamela
Nokuba kuxoxwa neqabane, umntu osebenza naye, amalungu eqela, okanye umhlobo oqhelekileyo, uninzi lwabantu luyakhawuleza ukuthetha kodwa luyacotha ukumamela. Unokwazi ukuba uyabuphucula ubuchule bakho bokumamela ngokubuza ingxelo emva kokuba wenze igalelo lakho
Umzekelo, buza imibuzo enje ngokuba impendulo yam ijongile ukukhathazeka kwakho? okanye ikhona enye into endinokukunceda ngayo? Kuya kufuneka umamele ngakumbi ukuze abantu bazi ukuba izimvo zabo zibalulekile kuwe, zisenza le yeyona mizekelo yeenjongo ze-SMART.
3. Thetha phezulu ukuze wandise ukubonakala
Ngaba ungomnye wabo bazifihlayo esixekweni kwaye kunzima ukuthetha kwiintlanganiso? Ukubeka usukelo lomntu siqu ukwandisa ukubonakala kwakho yinto efanelekileyo ekufuneka uyiqwalasele. Cwangcisa kwangaphambili phambi kwentlanganiso nganye ukuba ujonge i-ajenda kwaye uzilungiselele ukwenza igalelo elinengcinga nelinentsingiselo.
4. Ukuphucula ukuThetha / iZakhono zokuThetha esiDlangalaleni
Ngophando olucokisekileyo, ulungiselelo olwaneleyo, kunye nokuzilolonga, ungenza Iintetho ezisebenzayo zePowerPoint kwaye ahlangule iintetho ezinkulu. Misela injongo yokuhlala uphanda izihloko zakho ngokugqibeleleyo, kwaye wenze ixesha lokuziqhelanisa ngaphambi kwengcaciso nganye. Le yeyona mizekelo yeenjongo ezintle ze-SMART njengoko iya kukunceda wena buqu kunye noqeqesho.
5. Ukuphucula ubukrelekrele bakho beemvakalelo
Ungaseta iinjongo zokuba ungasabeli kangako kwimicimbi kwaye ujonge ekufumaneni iimvakalelo ezisisiseko kunye nenkuthazo yezenzo zabanye. Funda ukunxibelelana nabantu kwinqanaba labo.
Funda ngakumbi kweli nqaku: Yintoni ubukrelekrele bemvakalelo (kwaye ungabuKhulisa njani)
6. Qala iNethiwekhi
Unxibelelwano lubalulekile kuphuhliso lomntu kunye nomsebenzi. Cwangcisa usukelo lwakho lokuya kwimisitho emithathu yenethiwekhi rhoqo ngekota ukunxibelelana noogxa bakho abadala kwaye udibane nabantu abatsha.Intengiso
Zama la manyathelo mahlanu okuPhatha iZakhono zeNethiwekhi kwaye ugqibelele ukuPhawula kwakho.
izinto zokwenza i-tweet ukuze ubhale kwakhona
7. Amavolontiya Rhoqo
Xa kuziwa kwimizekelo yeenjongo ze-SMART, ukufaka iiyure ezimbini ngokuzithandela ngeveki kwinkonzo yoluntu kunokuba yindlela elungileyo yokubuyisa kwaye uzive ulungile. Isenokuba kukufundisa isifundo osithandayo kwisikolo samabanga aphakamileyo esikufutshane, ukuqeqesha abantwana kwibhasikithi, okanye ukuphaka ukutya kwindawo yokutyela yabantu abangenamakhaya.
8. Ukuphucula izakhono zokuLawula ixesha lakho
Gxila ngakumbi ekufezekiseni imisebenzi yemihla ngemihla. Nciphisa iziphazamiso kwaye wandise imveliso ngokuthi, ngama-40% kwezi nyanga zintathu zizayo. Zama ukwenza uluhlu lwezinto oza kuzenza okanye ukusebenzisa ii -apps kwifowuni yakho ukuze ugcine umkhondo.
Jonga ezi Iingcebiso ezi-7 zoLawulo lweXesha ukuze wandise ukuvelisa kwakho .
9. Vuka kwangethuba
Ngaba uhlala uziva umfutshane ngexesha? Misela injongo Vuka nge-5: 00 kusasa yonke imihla; uya kuba neyure eyongezelelweyo ukongeza ukwenza izinto ozithandayo ngaphambi kokuba umsebenzi wosuku uqale.
10. Funda iNye into eNtsha veki nganye
Akukho siphelo ekufundeni. Cwangcisa usukelo lomntu siqu ukongeza into entsha kulwazi lwakho kunye nesiseko sezakhono veki nganye. Funda incwadi, funda amagama amatsha esigama kolo lwimi lwangaphandle uhlala ufuna ukulithatha, okanye umamele ipodcast.
Fumana izimvo apha: Ungayifunda njani into eNtsha yonke imihla kwaye uhlale uhlakaniphile
11. Funda uLwimi lwangaphandle
Zininzi izibonelelo zokufunda ulwimi lwasemzini. Uyakwazi ukwandisa amathuba akho emisebenzi, ufumane abathengi abaninzi, ufumane abahlobo abaninzi, kwaye ufumane imali eninzi. Kuzo zonke ezi zizathu, le yenye yezona zinto zibalulekileyo kwimizekelo yeenjongo ze-SMART.
Unokufumana ukuthetha ngokutyibilikayo kulwimi lwasemzini ukuba uthe wenza iyure yonke imihla ekuyifundeni kwisithuba sonyaka omnye. Kungcono nokuba unokufumana isithethi sendabuko ukuba uziqhelanise naso.Intengiso
Nantsi Ufunda njani uLwimi kwimizuzu engama-30 nje ngosuku .
12. Yoyisa iziyobisi zeSocial Media
Ukuba ufuna ukwandisa imveliso yakho, kuya kufuneka ufunde ukulawula okanye ukubetha umlutha wakho wemidiya yoluntu. Oku kunokufezekiswa kwiintsuku ezimbalwa, iiveki, okanye iinyanga kuxhomekeke kwisigqibo sakho. Ukwenza oku kunokunika ukuzithemba kwakho ekunciphiseni ukuthelekisa ukuthelekisa.
13. Yandisa isantya sokuchwetheza ukuya kwi-60 WPM kwiinyanga ezintathu
Isantya sokuchwetheza kancinci sicothisa imveliso. Kuthiwa unako gcina iintsuku ezingama-21 ngonyaka ngokuchwetheza ngokukhawuleza . Ungaseta injongo yokunyusa isantya sakho sokuchwetheza kunye nokuchaneka kwimiba yeenyanga ezintathu.
14. Gcina iJenali yeziganeko eziphambili
Ukuziqhelanisa nako ukugcina ingxelo ukurekhoda imicimbi ephambili ebomini bakho kunokukunceda ugcine umkhondo wenkqubela phambili yakho. Oolindixesha banokukunceda uphinde ufumane inkuthazo nanini na ujongene nemeko enzima. Inokukunceda ukuba usebenze phantsi kweemeko ezinzima kwaye uzigcine uzimasekile, usenza le yezona njongo zibalaseleyo zokuqala.
15. Yiya kwiKholeji yeeAlumni Reunion kulo nyaka
Xa ujonga kwimizekelo yeenjongo ze-SMART, abantu abaninzi bajonge kwikamva, kodwa ukuphinda uqhagamshele kunye nexesha elidlulileyo kunokuba luncedo ngokunjalo. Nxibelelana nabahlobo bakudala kwaye ukhumbule iinkumbulo ngokubeka usukelo lokuya kwindibano yakho yeekholeji zakho kulo nyaka.
Mhlawumbi uya kunxibelelana nabantu abanokukhuthaza ubomi bakho okanye bancede ngomsebenzi wakho! Ikwalithuba elihle lokuziqhelanisa nezakhono zakho zonxibelelwano.
16. Lungiselela ukuhlangana kwakhona kosapho kabini ngonyaka
Ngabo bonke abantu abalandela amaphupha abo, ukugcina ubudlelwane obomeleleyo bosapho kungafuna ukucwangcisa ngabom ukudibana kosapho. Ukudibanisa wonke umntu rhoqo ngonyaka okanye kube kanye qho emva kweminyaka emibini ngekhe kube ngumbono ombi.
17. Funda uLwimi lweNkqubo
Umhlaba ufumana ubuchwephesha ngakumbi ngemini, kwaye wonke umntu ufuna ulwazi oluthile lwenkqubo.
Kwenze usukelo lokufunda iziseko zolwimi lwenkqubo, kwaye ukuba uyathandwa yenye, kutheni ungenzi ixesha elongezelelekileyo lokuba yingcali kuyo ngezifundo ezongezelelweyo?
18. Cima onke amatyala angekahlawulwa kwiinyanga ezi-6
Ukuhlala ematyaleni kungazisa uxinzelelo olukhulu ebomini bakho. Ungaseta iinjongo zokucima onke amatyala akho kwiinyanga ezintandathu. Oku kunokufikelelwa ngokufunda iindlela zokungabinamatyala ngokukhawuleza: Ulihlawula njani ityala ngokukhawuleza usebenzisa indlela efumileyo (Isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo)
Qalisa ukusebenza kule nto ngoku, kwaye uyakumangaliswa ukuba ityala linciphe ngokukhawuleza kangakanani.
19. Yandisa Umoya
Ubumoya buthetha izinto ezahlukeneyo kubantu abohlukeneyo. Nokuba iyintoni na kuwe, unokuzibekela usukelo lokuzinikela ngakumbi kwaye uchithe ixesha elininzi utyebisa loo nxalenye yakho. Oku kunokuba yenye yeemodeli zeenjongo zeSMART eziphucula impilo yakho yengqondo, ngokunjalo.
Oku kusenokungathethi ukuya ecaweni. Abanye abantu baya kufumanisa ukuba banxibelelana kakhulu nemeko yabo yokomoya ngelixa basebenza egadini, behamba kwindalo, okanye becamngca. Fumana into ekunceda unxibelelane noluvo olunzulu lwentsingiselo kwaye uyilandele.
imizekelo yeenjongo zomsebenzi wokuphononongwa kokusebenza
20. Phinda uqhagamshele kunye neentshaba
Kuqhelekile ebomini ukuba abantu bakucaphukise kangangokuba ubathintele ebomini bakho. Oku kwenzeka kakhulu kwimidiya yoluntu.
Cwangcisa usukelo lomntu ukuyeka elidlulileyo kwaye ujonge kwaba bantu ubathinteleyo ngombono omtsha. Banokuthi bajike igqabi elitsha, kwaye ungothuka ukufumanisa ukuba baxabisekile kwakhona.
Iinjongo zakho zobuqu ze-SMART zinokuba malunga nantoni na. Kuya kufuneka uqiniseke kuphela ukuba ungalusebenzisa uqeqesho, izixhobo kunye neemfuno oza kuzidinga ukufezekisa. Njani? Ukubamba Isikhokelo somphuphi ekufikeleleni kwinjongo yakho kwaye ufumane!
Awunakho ukufezekisa i-100% yeenjongo zakho ngalo lonke ixesha, kodwa kubalulekile ukuseta iinjongo zakho usazi ukuba uhambela phambili ngobomi bakho. Jonga imizekelo yeenjongo ze-SMART apha ngasentla kwaye uqale ukuseta eyakho namhlanje. Intengiso
Imigaqo esi-7 yokuZibekela iinjongo (kunye nokuzifikelela)
Ukubeka njani iiNjongo zoBuntu kukwenza ukuba ube nguMphumeleli oMkhulu
Uyenza njani iSicwangciso sokuSebenza kunye nokufezekisa iinjongo zakho
Ukuseta iinjongo: Isikhokelo sokugqibela
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: Imveliso yokuDijithali kaEmma Matthews nge unsplash.com
 ^ IzakhonoUdinga: Ukubeka iinjongo zobuqu
 ^ Kanjalo: Iinjongo zeSMART: Inkcazo kunye nemizekelo
 ^ Ikliniki yaseMayo: Amanyathelo ayi-10,000 ngemini: uphantsi kakhulu? Ephakamileyo kakhulu?
 ^ UVijay Banker: Ubukrelekrele bemvakalelo
 ^ Ukunyaniseka: Kuthatha ixesha elingakanani ukufunda iSpanish
 ^ Umsebenzi weKarma: IiLwimi eziLula kakhulu zokuFunda ukuze ufunde kwi-2020 -IiLwimi ezi-17 ezilula zokufaka iikhowudi
amanzi ashushu alungele ulusu lwakho
ungayisebenzisa itunes kwi-android
Ungasusa njani isisu esibuhlungu
Ezona ncwadi zokuqala ukufunda
ungachithi njani ixesha
Ubomi Uphononongo Lweapp Kuchaphulo Olu Uluntu 2 Ipodcast